ललितानिवास जग्गा कीर्ते प्रकरणः मूख्य अभियुक्त सुवेदी दम्पत्ति थुनामुक्त ! « Nepal Bahas
ललितानिवास जग्गा कीर्ते प्रकरणः मूख्य अभियुक्त सुवेदी दम्पत्ति थुनामुक्त !
प्रकाशित मिति : २८ पुष २०७८, बुधबार १४:१४
२८ पुस, काठमाडौं । ललितानिवास जग्गा कीर्ते प्रकरणमा पक्राउ परेका रामकुमार सुवेदी र उनकी श्रीमती माधवीलाई प्रहरीले २२ दिनपछि छाडेको छ । यसरकारी वकिलको कार्यालयले बालुवाटारस्थित ललितानिवास प्रकरणको फाइल प्रहरीलाई फिर्ता गरेपछि अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका भूमाफिया रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवीलाई प्रहरीले छाडेको हो ।
योसँगै अब सीआईबीको अनुसन्धान प्रक्रिया रोकिने संकेत देखिएको छ । ‘जब मूख्य अभियुक्तहरु छाडिए भने अन्य विषयमा अनुसन्धान हुन्छ भन्नु मूर्खता हो’, एक सरकारी वकिलले भने ।
केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धानको क्रममा आवश्यक परेका बेला उपस्थित हुने शर्तमा मंगलबार साँझ उनीहरुलाई हिरासत मुक्त गरेको हो । ‘ प्रहरीले उनीहरु भाग्ने अवस्था नदेखेको हुँदा आवश्यक परेको बेला अनुसन्धानमा सहयोग हुने गरी शर्तमा छाडिएको हो अन्यथा होइन’, सीआईबीका प्रमुख डीआईजी धीरजप्रताप सिंहले भने ।
सीआईबीले करिब तीन वर्ष लगाएर अनुसन्धान गरेको थियो । करिब ४ सय जना मानिसहरुलाई मुद्धा चल्न सक्ने जनाएको भएपनि कर्मचारीलाई मात्र आरोपित गरेर फाइल बुझाएको थियो ।
ललितानिवासको सरकारी जग्गा छानविन समितिले उनीहरुलाई मूख्य अभियुक्तको रुपमा किटान गरेको थियो । प्रहरीले भने व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्दा सरकारी कागजात कीर्ते गरेको आरोप लागेका सुवेदी र उनकी पत्नी माधवी यही पुस ७ गते पक्राउ गरेको थियो । डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयमा लेखनदासको काम गर्ने सुवेदीले अर्का भूमाफिया शोभाकान्त ढकालसँगको मिलेमतोमा सरकारी स्वामित्वमा आईसकेको ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउन भूमिका खेलेको आरोप थियो । सीआईबीले सो सम्बन्धि अनुसन्धानमा थप प्रमाण जुटाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले फाइल फिर्ता गरेसँगै प्रहरीले प्रमाण जुटाउनु पर्ने भएको हो । राजनीतिक दवाव र प्रभावमा सो फाइल फिर्ता भएको स्रोतले जनाएको छ । महान्याधिवक्ता खम्बबहादुर खातीकै निर्देशनमा सरकारी वकिलको कार्यालयले सीआईबीलाई थप अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिदै फाइल फिर्ता भएको स्रोतले जनाएको छ । सीआईबीले करिब तीन वर्ष लगाएर अनुसन्धान गरेको थियो । करिब ४ सय जना मानिसहरुलाई मुद्धा चल्न सक्ने जनाएको भएपनि कर्मचारीलाई मात्र आरोपित गरेर फाइल बुझाएको थियो ।
ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा सीआईबीले ३ सय जनाभन्दा बढी व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर गर्न सकिने रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो । कार्यालयले लिखत कीर्ते मुद्दा चलाउन पर्याप्त आधार नपुगेको भन्दै प्रमाण अझै बलियो बनाउन सोमबार निर्देशन गरेको छ । निर्देशनसहित थप अनुसन्धान गर्न प्रतिवेदन फाइल फिर्ता पठाउनु नियमित प्रक्रियाजस्तै भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
यो मुद्दामा मुलुकी संहिताअनुसार हदम्याद लागू हुने भएकाले फाइल फिर्ता भएको सरकारी वकिलको तर्क छ । सीआईबीले तीन सयजनाभन्दा बढीलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कसलाई मुद्दा चलाउने, नचलाउने भन्ने निक्र्योल सरकारी वकिलको कार्यालयले गर्नुपर्छ । सीआईबीले ललितानिवास जग्गा प्रकरणको २०७६ फागुनदेखि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । कीर्ते मुद्दामा ४ सयभन्दा बढी व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चल्न सक्ने र त्यसमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वसमेत तानिनसक्ने बताइएको छ। तर सीआईबीको प्रतिवेदनमा राजनीतिक नेतृत्वलाई छोइएको छैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ सय ७५ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै दुई वर्षअघि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो । विशेष अदालतमा दर्ता भएको मुद्दामा प्रतिवादीहरूको थुनछेक बयान सकिसकेको छ । अख्तियारले प्रतिवादी बनाएका सबैजना कीर्ते मुद्दामा नपर्न सक्ने सीआईबीले जनाएको छ । जग्गा प्रकरणमा लिखतसँग सम्बन्धित कसुरमा संलग्नलाई मात्रै कीर्ते मुद्दा चल्नेछ ।
२०४९ देखि २०६९ सालसम्ममा ललितानिवासको १ सय ४३ रोपनी जग्गासम्बन्धी लिखत कीर्ते गरी हिनामिना भएको सीआईबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर गृहमन्त्रालयले सो प्रतिवेदनलाई कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन हुन नदिएपछि प्रहरी र सरकारी वकिलबीच आरोप प्रत्यारोप गर्दै फाइल फिर्ता भएको हो ।
हेभि सवारी चालक तालिम समापन
चार वर्षीय छोरासहित महिला सम्पर्कविहीन
सुदूरपश्चिम कति थपिए कोरोना संक्रमित ?
सत्ता गठबन्धनका शीर्ष तीन नेताबीच कुराकानी
हिमपातले हुम्लामा हवाई सेवा प्रभावित
कोरोनाले लोकसेवाका सबै लिखित परीक्षा स्थगन
प्रतिष्ठान प्रदेशमा २३० पत्रकार संक्रमित
काठमाडौंमा एकै दिन ६,९८१ जनामा कोरोना पुष्टि
पानीमाथि वडा कार्यालय भवन, वरिपरी पोखरी व्यवस्थित
पाँच स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माणको काम अलपत्र
बन्दीपुर केबलकारमा लगानी वृद्धि
अन्नपूर्ण पदमार्ग पुनः सुनसान, पर्यटन चिन्तित !
स्याङ्जामा यसवर्ष ५७ करोडको सुन्तला बिक्री
सप्तरीमा ३० जनामा कोरोना पुष्टि
अर्घाखाँचीमा कोरोना संक्रमितको संख्या १ सय नाघ्यो